शृंखलालाइ जिताउन अब ३ दिन मात्र बाँकी , तपाइको १ सेयरले बढ्नसक्छ १०० भोट सँगै सेयर पनि गरौ – Gorkhali Voice
शृंखलालाइ जिताउन अब ३ दिन मात्र बाँकी , तपाइको १ सेयरले बढ्नसक्छ १०० भोट सँगै सेयर पनि गरौ
२० मंसिर २०७५, बिहीबार १८:२४
काठमाडौं ।चिनमा भइरहेको मिस वर्ल्ड २०१८ मा सहभागिता जनाएर संसारभर चर्चा कमाइरहेकि नेपाली चेली श्रृङ्खला खतिवडाले राखिन मिस वर्ल्डको इतिहासमै यस्तो रेकर्ड जुन आजसम्म कुनै देशका सुन्दरीले राखेकि छैनन । आखिर के हो त्यो रेकर्ड ? सबैका लागि जिज्ञासाको बिषय बन्नु स्वभाविक हो । मिस वर्ल्डको प्रतिस्पर्धामा देशलाइ चिनाइरहेकि मिस नेपाल शृङ्खला खतिवडाले मल्टिमिडिया अवार्ड जित्दै मिस वर्ल्ड २०१८ को अन्तिम ३० का लागि स्थान सुरक्षित गरेकी छन् । हेड टे हेडमा पराजित भएर निराश भएकि शृङ्खलाले फेरि सारा नेपालीलाइ खुसि दिलाएकि छिन । भनिन्छ नि प्रतिक्षाको फल मिठो हुन्छ । आखिर मिठै भएर निस्कियो प्रतिक्षाको फल पनि । अन्तः मिस नेपाल शृङ्खलाले जितिन दुइटा अवार्ड । नेपालकी चेली श्रृङ्खलाले मिस वर्ल्ड मल्टिमिडिया र ब्युटी विथ अ पपर्स दुई वटा अवार्ड जितेर इतिहास रच्न सफल भएकी छिन् ।
दुई वटा अवार्ड जितेसंगै यो यस्तो रेकर्ड बन्यो कि जुन आजसम्म कुनै देशका सुन्दरीले बनाउन सकेका छैनन । सँगै मिस वर्ल्ड प्रतियोगितामा दिइने फास्ट ट्रयाक अवार्ड जम्मा ५ वटा मात्रै छन । त्यसमा पनि आजसम्म कुनै देशका सुन्दरीले २ अवार्ड जितेका छैनन । तर मिस नेपाल २०१८ श्रृङ्खलाले मिस वल्र्ड मल्टिमिडिया र ब्युटी विथ अ पपर्स दुई वटा अवार्ड जित्दै मिस वर्ल्ड प्रतियोगिताको इतिहासमा दुई वटा फास्ट ट्रयाक अवार्ड जित्ने पहिलो सुन्दरी बन्न सफल बनेकि छिन यो संसारभर रहेका नेपालीहरूको लागि खुसिको खबर हो । उनले मल्टिमिडिया अवार्ड र व्युटि विथ अ प्रपल अवार्ड गरि दुइवटा अवार्ड आफ्नो पोल्टामा पारिन र मिस वर्ल्ड को फाईनलमा स्थान बनाइन । दोस्रो हेड टु हेडमा सिंगापुरसंग पराजित भएपनि अन्तः श्रृङखला मिस वर्ल्ड २०१८ को फाईनलमा प्रबेश गरेकी हुन । यतिमात्र होइन टुरिज्म भिडियो च्यालेन्जमा पनि श्रृङखलाले तेस्रो स्थान बनाउँन सफल भएको छ ।
उनलाई यसरि भोट गर्न सकिन्छ >मिस नेपाल २०१८ की विजेता हुन श्रृंखला खतिवडालाई मिस वर्ल्डको दाबेदारको रुपमा हेरिएको छ । मिस वर्ल्डमा नेपाली उपस्थितिको अहिलेसम्मको इतिहासमा अत्याधिक चर्चा र वाहवाही प्राप्त गर्न सफल कम्यूनिष्ट राजनीतिक पारिवारीक माहोलमा हुर्कीएकी मकवानपुरकी २२ वर्षिया अार्किटेक्ट श्रृंखला खतिवडाको । विश्व अर्थतन्त्रको शक्तिशाली ठूलो कम्यूनिष्ट देश चीनमा हुँदैगरेको ६८ अाैं संस्करणको यि विश्व सुन्दरी प्रतियोगीतामा यस पटक श्रृंखलाले सबको ध्यान अाफूतिर अाकर्षित गर्न सफल भएकी छिन् ।
मिस वर्ल्डको अाधिकारीक वेबसाइट बाहेक यो पनि अाधिकारीक त्यो पनि अाधिकारीक भनी विभिन्न डिजिटल प्ल्याटफर्म, सामाजिक सञ्जाल एप मोभस्टारमा भोटिङ भईरहेका छन् । तर अाधिकारीक बाहेकका सबै भोटले श्रृंखलाको यो यात्रालाई सकारात्मक सहयोग गर्छ त ? हरेक प्लाटफर्ममा भोटिङका अाधारमा अहिले श्रृंखला नम्बर १ स्थानमा छिन भन्ने अासयको समाचार छताछुल्ल छ ।
यता मिस वर्ल्डको अाधिकारीक भोटिङ साइटमा ४१.८२% प्राप्त गर्दै श्रृंखलाले वास्तवमैं भोटिङको अग्रपङ्कतिमा छिन । उनलाई अग्रता बनाइराख्न तपाईले https://www.missworld.com/#/ मा गएर १३ अाैं लहरको चौथो नम्बरमा हामी श्रृंखलालाई उनले प्राप्त गरेको भोट सहितको तस्बिर र भोट गर्नका लागि बटन पनि राखिएको छ । भोट गर्नका लागि तपाईँले लग इन गर्नुपर्नेहुन्छ । लगइन गर्न धेरै सजिलो छ त्यसको लागि https://www.missworld.com/#/login खोल्नुहोस् र त्यहाँ खुल्ने लगइन पेजमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम अथवा G+ राखिएको छ ती तिनवटा विकल्पमध्ये कुनै एकलाई क्लिक गरेर तपाईँले सहजै लगइन गर्न सक्नुहुनेछ ।
लगईन हुने बित्तिकै वेबसाइट तुरुन्त गर्ने पेजमा पुग्छ पाना थोरै तल स्क्रोल गर्नुहोस् श्रृंखलालाई देख्नसक्नुहुनेछ । श्रृंखलाको फोटोमा नामको तल प्राप्त भोट उल्लेखित ठाउँमा थिच्नुहोस् छेवैमा VOTE भन्ने बटन देख्नुहुनेछ । त्यस VOTE बटन थिच्नुहोस् श्रृंखलाले तपाईँको भोट प्राप्त गरेको सन्देश पेजको तल अाउनेछ ।
यसैगरी गुगल प्ले स्टोरमा गएर MObiStar भन्ने एप डाउनलोड गरेर पनि उनको प्रोफाइललाइ लाइक गर्न सक्नुहुन्छ।
शेयर गर्नुस, के थाह तपाइको एक शेयरले अरु १०० जना ब्याक्तिकोमा र त्यसरी लाख पुगेर उनले जित्न सक्छिन ।